एक अनलाइन क्यासिनोमा, इजरायलमा आधारित खेलाडीहरूले स्वतन्त्र रूपमा गेमि session सत्रको मजा लिन सक्छन् र स्थानीय सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन। इजरायल आईगिमिंग ईन्डस्ट्रीमा केहि सबैभन्दा ठूला र लोकप्रिय स्टार्टअपहरूको घर हो। जे होस्, एक इजरायली खेलाडीका रूपमा तपाईले हाम्रो विशेषज्ञ सिफारिसहरूको पालना गर्नुपर्नेछ जब कुनै विशेष गेमिंग साइट छनौट गर्नुहुन्छ जुन तपाईको आवश्यकता अनुसार मिल्छ स्थानीय क्यासिनो अपरेटरहरू विदेशी बजारमा लक्षित छन्।
इजरायलमा, अनलाइन क्यासिनो साइटहरू देश छाडेर नगरी गेमहरू खेल्नका लागि मात्र विकल्प हुन्। जब यो उत्तम अनलाइन इजरायल क्यासिनो छनौट गर्न आउँदछ, विचार गर्न त्यहाँ धेरै कुरा छन्। यहाँ तपाइँ शीर्ष १० इजरायल अनलाइन क्यासिनोको विस्तृत समीक्षा पाउनुहुनेछ र खेल खेल सुरु गर्नु अघि सबै आवश्यक जानकारी पाउनुहुनेछ।
शीर्ष १० इजरायली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० इजरायली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
शीर्ष इजराइली अनलाइन क्यासिनोहरूको सूची
त्यस्ता उद्योग महापुरूषहरू सहित धेरै सफल हाइटेक कम्पनीहरूको गृह Playtech र 888 XNUMX, इजरायलले जुवा खेल्ने कुरामा आश्चर्यजनक कडा अडान लिन्छ।
हालको कानून अनुसार सबै अवसरका खेलहरू प्रतिबन्धित छन्, त्यसकारण यो मध्य पूर्वी मोती केही लोकप्रिय पर्यटन स्थलहरू मध्ये एक हो जुन उनीहरूको पाहुनालाई भूमिमा आधारित क्यासिनोको उत्सवको वातावरण प्रदान गर्न असमर्थ छ।
अन्य देशहरू जस्तै जुन सट्टेबाजीमा सम्बन्धित गतिविधिहरू थिए, इजरायलले सामान्य प्रतिबन्धमा दुई अपवाद गर्दछ।
सर्वप्रथम, यसले राष्ट्रिय चिठ्ठी मिफल हापाइसिसद्वारा संचालित विभिन्न लटरीहरू र रफलहरूलाई अनुमति दिन्छ। १ 1951 2017१ मा वित्त मन्त्रालयको सुपरिवेक्षणमा स्थापना गरिएको, मिफल हापाइसिसले सीमित संख्यामा VLT संचालन गर्‍यो, तर यो अनुमति २०१ XNUMX मा खारेज गरियो।
दोस्रो, इजरायल खेलकुद सट्टेबाजी बोर्ड (ISBB) सँग खेल सट्टेबाजीलाई व्यवस्थित गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार छ। १ 1967 inXNUMX मा सुरू भयो, सुरूवातमा यसले ब्याजरहरू मात्र लिन सक्दछ फुटबल र बास्केटबल तर पछि अन्य खेलहरू जस्तै टेनिस, ह्यान्डबल, र अन्यको लागि इजाजतपत्र प्राप्त गर्‍यो।
पोकरले कसरी व्यवस्थापन गरेको छ ...
.. सबै विचित्रहरूको बावजुद एक विशेष स्थितिमा हडताल गर्न। २०१ 2018 मा, इजरायलको सर्वोच्च अदालत यस स्कोरमा पूर्ण रूपमा सिधा थियो - पोकर विशेष गरी पोकर टूर्नामेन्टको सन्दर्भमा अवसरको खेल मान्नु हुँदैन।
र एउटा अर्को कुरा। चित्र एलाट क्यासिनो क्रूजको उल्लेख नगरी पूर्ण हुनेछैन। लाल समुद्रमा अवस्थित यो प्रख्यात रिसोर्ट शहरले जटिल जहाजहरूको गुच्छा प्रदान गर्दछ लोड भयो भेगास मनोरन्जनको पूर्ण स्पेक्ट्रमको साथ: प्रगतिशील ज्याकपट्सबाट उच्च-सीमा तालिकाहरू। हो, एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय पानी पुगेपछि।
इजरायलमा अनलाइन जुवा एक किसिमको हो र कुनै उत्तरहरू छैनन्, जबकि अनलाइन जुवाका केही प्रकारहरू कानुनी र सम्भव छन्, जबकि अन्य त्यस्तो छैन। खेल शर्त विकल्पहरू र देशको राष्ट्रिय चिठ्ठी दुबै अनलाइन र अफलाइन स्थानहरू मार्फत चलाउन सकिन्छ, यद्यपि जुवाका अन्य कुनै पनि रूपहरू इजरायली नागरिकहरूलाई भित्रबाट पहुँच गर्नका लागि कानुनी छैनन्। यो अवस्था हो, तपाईं इजरायल भित्र कुनै क्यासिनो फेला पार्दैन कि पोकर वा स्लट खेल प्रदान गर्दछ वा रूले उदाहरणका लागि, त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई। त्यो भनिएको छ, अनलाईन क्यासिनोमा आधारित अफशोरमा पहुँच र खेल्दा अझै पनि सरकारले गैरकानुनी ठान्दछ, त्यहाँ उनीहरूले यो गर्न सक्षम भएका छैनन्। खेलाडीहरू विशेषतया अफशोर अनलाइन क्यासिनोहरूमा पहुँचको लागि मुद्दा चलाइदैनन्, त्यसैले त्यहाँ जूवाको बारेमा इजरायली कानूनको वरिपरि तरिकाहरू छन्।
जुवा प्लेटफर्महरू र भूमिमा आधारित प्रतिष्ठानहरू जुन इस्राएल भित्र पहुँचयोग्य छन् यद्यपि सरकारले धेरै निरीक्षण र नियमन गर्दछ। एउटा अर्को कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ कि क्यासिनो खेलहरू र त्यस्ता गैरकानुनी ठानिने भए पनि त्यहाँ ठूलो संख्यामा क्रूज जहाजहरू छन् जुन इजरायलको बन्दरगाहमा त्यस्ता खेलहरू प्रदान गर्दछन्। समग्रमा भन्ने हो भने, जुवा खेल्ने उद्योग इजरायलमा ठूलो किसिमको छ, यद्यपि जुवा खेल्ने केहि प्रकारहरू अवैध छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद। राष्ट्रिय चिठ्ठी, जुन माथि भनिएको छ अनलाइन र अफलाइन उपलब्ध छ, नागरिकहरूमा धेरै लोकप्रिय रहन्छ, र समग्रमा सट्टेबाजी उद्योगले वार्षिक आधारमा लगभग $.$ बिलियन डलर ल्याउँछ।
सर्वश्रेष्ठ इजरायली क्यासिनो साइटहरू
इजरायलमा अनलाइन क्यासिनो खेलहरू उपलब्ध छन्
इजरायली नागरिकहरूले सयौं विभिन्न वास्तविक पैसा क्यासिनो खेलहरू अफशोर अनलाइन क्यासिनोमा पहुँच गर्न सक्दछन्। यसमा सबै ठूलो नाम अनलाइन क्यासिनो सफ्टवेयर कम्पनीको स्लट खेल र टेबल खेलहरू समावेश छन्। अनलाइन क्यासिनोमा उपलब्ध खेलहरूको बारेमा पत्ता लगाउन हाम्रो गाईडहरू पढ्नुहोस्:
इजरायली शेकेलले निक्षेप र निकासी
जे होस् इजरायली खेलाडीहरूले अनलाईन क्यासिनो र गेमि sites साइटहरू अफशोरमा आधारित पहुँच गर्न सक्दछन्, त्यहाँ इजरायली शेकेल मुद्रामा जम्मा गर्ने र खेल्ने विकल्प प्रदान गर्ने त्यहाँ ठूलो संख्या छैन। जब यो सानो समूह फेला पार्न सम्भव छ, सम्भावना यो छ कि देशबाट खेलाडीहरूले जम्मा गर्नु पर्छ र उनीहरूको मुद्रा प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ। अमेरिकी डलर सम्भवतः मुद्रा हो जुन जानका लागि उत्तम हुनेछ। काश, यदि यो मामला हो भने, इजरायल भित्रका खेलाडीहरूले अझै पनि उनीहरूको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न केहि फरक भुक्तान विधिहरू प्रयोग गर्ने मौका पाउने छन्। तिनीहरूमा विकल्पहरू समावेश छन्:
क्रेडिट र डेबिट कार्डहरू: भिसा, मास्टरकार्ड, मास्ट्रो
प्रीपेड कार्ड: ईन्ट्रोपे
बैंक स्थानान्तरण: बैंक वायर ट्रान्सफर
शीर्ष १० इजरायली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 8, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० इजरायली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० इजरायली अनलाइन क्यासिनो साइटहरू एक विशाल बोनसको साथ!
2 शीर्ष इजराइली अनलाइन क्यासिनोहरूको सूची
3 इजरायलमा जुवा
4 इजरायलमा अनलाइन क्यासिनो खेलहरू उपलब्ध छन्
5 इजरायली शेकेलले निक्षेप र निकासी
शीर्ष १० इजरायली अनलाइन ...